News Archives - Crown Education
Posted on: Nov 16 ,2018
ဒီဘက်ခေတ်လုပ်ငန်းခွင်တော်တော်များများမှာ အရည်အချင်း ပြည့်မီစွာ ဦးဆောင်နိုင်သူများစွာ လိုအပ်လျက်ရှိတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သွားရောက်ပညာသင်ယူခြင်းဟာ အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတာ လုံလောက်တဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံတွေအပြင် တစ်ဖက်မှာ လည်း ...
နိုင်ငံတကာကျောင်းသားလူငယ်တွေအတွက် သင့်တမျှတတဲ့စာသင်စရိတ်သာမက ကျောင်းအပြီး တရားဝင်နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်များကြောင့် ယခုနှစ်များအတွင်း ကနေဒါနိုင်ငံကို ရွေးချယ် သင်ကြားမှုနှုန်း ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ရွေးချယ်သင်ယူစရာ တက္ကသိုလ်အများအပြားထဲကမှ လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိတဲ့အပြင် ကျောင်းလခသင့်တင့်မျှတတဲ့ University Canada West ကိုညွှန်းဆို ...
American College Program တက်ရောက်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကြား GPA(4.0)ဖြင့် စံချိန်တင် ရမှတ် ရရှိခဲ့သူ မဆုသစ်သဇင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ (၁) University of Drexel, (၂) Rochester Institute of Technology, ...
Posted on: Nov 09 ,2018
ပြည်ပတက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးလုပ်တဲ့အခါ Pathway Program တွေက တစ်ဆင့်သွားသင့်လား? တက္ကသိုလ် တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားသင့်လား? နိုင်ငံတကာကျောင်းသား၊လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပြည်ပ ပညာရေး သွားဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါ Pathway Programတွေကနေ စသွားမလား?ကိုယ်တက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတိုက်ရိုက်သွား သင်မလား ဆိုပြီး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်…တက္ကသိုလ်ကို တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်တက်တာကတော့ ...
ပြည်ပထွက်ပြီး စာသင်ကြားမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေစပြင်ရမလဲ?
Posted on: Aug 18 ,2018
ပြည်ပထွက်ပြီး သင်ကြားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားစွမ်းရည်ကို ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပြီး ဘယ်လိုတက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်ကကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ်ဆိုတာကို ရွေးချယ်သင့်သလို ကိုယ်သွားမယ့် နိုင်ငံရဲ့ Cultureတွေကိုလည်း ကြိုတင်လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါ ရေတိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေရှည်လျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးချယ်မှုမမှားရအောင် ခေါင်းအေးအေးထားပြီး ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်သင့်တာကို မျှတစွာ ရွေးချယ်ပါ..… ပြည်ပမှာစာသင်ကြားမှုလုပ်တဲ့အခါ ...
“iGCSE ဖြေဆိုထားသူများအတွက် အကောင်းဆုံး Program တစ်ခု”
iGCSE ဖြေဆိုထားတဲ့သူတွေက အနေနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသာမက၊ သြစတြေလျ၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံကတက္ကသိုလ်တွေကိုဆက်လက်လျောက်ထားနိုင်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ Program တစ်ခုရှိနေပါပြီ၊ ဒါကို GAC (Global Assessment Certificate) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ GAC လက်မှတ်ကိုဘယ်က ချီးမြင့်လဲဆိုတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရတက္ကသိုလ်တွေ ...
Posted on: Aug 15 ,2018
iGCSE ဖြေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ရှေ့ဆက်လျောက်လှမ်းရမယ့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်...အမှတ်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်… iGCSE အမှတ်မှာ နည်းတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်... iGCSE အမှတ်နည်းတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ဝါနာမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ရှေ့ဆက်စရာပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်... IELTS အကြောင်းတွေကိုလည်းသိထားဖို့လိုပါတယ်... ❑ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ကျောင်း၊သင်ယူချင်တဲ့ဘာသာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီလား.... ❑ နိုင်ငံတကာမှာ ဆေးကျောင်းတက်မယ်ဆို၊ ဘယ်နိုင်ငံတွေရွေးချယ်သင့်တယ်...သတိထားရမယ့် အချက်တွေကိုသိပြီလား... ❑ ...
Posted on: Jul 31 ,2018
❑ HND, NCC, ABE သင်ယူထားသော မြန်မာကျောင်းသား ကျောင်းသူများအနေဖြင့် ပြည်ပ တက္ကသိုလ်များ ရွေးချယ်တက်ရောက်ရာတွင် ပြင်ဆင်သိထားသင့်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ… . ❑ ပြည်တွင်းမှာ HND (Electrical/Mechnical/IT) ပြီးထားသည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် စာသင်(၈)လဖြင့် ...
Posted on: Mar 15 ,2018
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို သူနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စေချင်ကြပါတယ်.. ရွေးချယ်စရာ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ များလွန်းတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲ သားသမီးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိဘဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို CROWN ...